Dalka iyo lacagta lagu maal-geliyay weerarkii DusitD2 oo la shaaciyey
Booliska ayaa rajo ka qaba in baaritaankooda uu soo afjari doonto shabakad balaaran oo maal-gelinta u qaabilsan Al-Shabaab.
NAIROBI, Kenya – Wargeyska The Standard ayaa daabacay warbixin ay ku jirto macluumaadyo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay bishii Janaayo ku ekeysay huteelka DusitD2 ee Nairobi, caasimadda Kenya.
Warbixinta majaladda oo lagu soo xigtay illo wareedyo aanan la magacaabin una badan baareyaal haatan gacanta ku haya kiiskan ayaa diiradda lagu saarey qaabka loo maal-geliyay duulaankaasi, cadadka lacagta iyo dalka ay ka timid.
Jaraa'idka oo shaacisay in qiimaha ay gaareyso ku dhowaad 23-milyan oo dollar-ka Mareykanka ayaa tilmaamay in ay ka timid wadanka Koonfur Afrika kahor inta aanan loosoo dirin Soomaaliya oo aanan qaybqayb loo gudbin.
Baareyaasha oo ku daba jira shaqsiyaad lagu tuhmayo maalgelintan oo badankooda ah Kenyan ah kuwaasi oo adeegsaday Xawaalado iyo Bankiyo maxali ah ayaa qaarkood waxay qaxooti ahaan ku joogan Koonfur Afrika.
Hay’addaha Amniga oo diiradda saaraya Cape Town, halkaasi oo ay aaminsan yihiin in abaabulka ugu badan uu ka dhacay ayaa rajeynaya in baaritaankooda ay soo afjari doonto shabakad balaaran oo maaligelinta u qaabilsan Al-Shabaab.
Howlgalka lagu galay DusitD2 oo ay fuliyeen koox ka kooban ayaa la sheegay in lacagta ay u soo gaartay qayb-qayb ayna ku iibsadeen hub, diyaarado aan duuliye lahayn, gaadiid iyo in ay isaga bixiyeen kirada guryo ay deganaayeen.
"Lacagta waxay kusoo gaartey muddo saddex bilood gudaheeda ah iyadda loosoo mariyo Xawaaladaha. Kadibna iyadda oo cadaan ah ayaa loo diray Soomaaliya," ayuu yiri mid kamid ah baareyaasha oo magaciisa ka gaabsaday.
Saraakiisha oo ku sugan Koonfur Afrika halkaasi oo ay kula kulmeen booliska ayaa ku dhaliilay maamuleyaasha bankiyadda in ay ogaan waayeen shabakadan isku xiran.
In ka badan 30 ruux oo ay ku jiraan ajaaniib u dhalatay Mareykanka iyo Ingiriiska balse badankooda ay yihiin Kenyan ayaa lagu naf-gooyey weerarkaasi, wallow ay kooxda gacansaarka la leh Al-Qaacida ay sheegatay tiro intaasi ka badan.
Nidaamka dhaqaale ee A-Shabaab oo ku lug-yeesho qaybo kala duwan oo caalami iyo maxali isugu jira ayaa waxay kooxda u xakameysaa qaab toos ah iyo mid aanan toosna, iyadda ay wax kasta u muuqdan kuwa aad looga taxadiray.
Maleyshiyaadkan ayaa la aaminsan yahay in dhaqaalaha ay ka helaan hay’addo dowladeed, Qurbe joogta, burcad-badeeda, ganacsiga sharci daradda ah iyo lacagaha baada ah oo ay ka qaadan dadka.
Ciidamada amaanka ayaa xabsiga dhigay wariyahan oo ahaa shaqsi caan ka ah dalka...
Ciyaaryahankii la xagjireeyay ee noloshiisa u hibeeyay Al-Shabaab
Afrika 07.10.2019. 11:14
Kenya oo sheegtay in faragelin lagu hayo Soomaaliya
Afrika 04.05.2018. 00:52
Kenya oo laga cabsi qabo inay weeraro ka dhacaan
Afrika 09.05.2018. 12:15
Kenya oo sheegtay in ay dishay saddex ka tirsanaa Al-Shabaab
Afrika 16.07.2019. 13:22